warkii.com » Jurgen Klopp Oo Magacaabay LABO Xiddig Oo Liverpool Ka Caawin Doona Inay Garaacdo Kooxaha Kale – Maaha Salah, Mane, Firmino, Henderson, Arnold Iyo Van Dijk
Jurgen Klopp Oo Magacaabay LABO Xiddig Oo Liverpool Ka Caawin Doona Inay Garaacdo Kooxaha Kale – Maaha Salah, Mane, Firmino, Henderson, Arnold Iyo Van Dijk
Tababare Jurgen Klopp ayaa magacaabay labo xiddig oo ka tirsan kooxdiisa oo ka caawin doona inay masaafo ka sarreeyaan naadiyada kale xili ciyaareedka dambe, kuwaas oo sabab u noqon doona inay difaacdaan horyaalka.
Liverpool waxay 5-3 ku garaacday Chelsea oo kusoo booqatay Anfield ka hor intii aanay u dabbaal-degin koobka oo lagu guddoonsiiyey xaflad qurux badan iyo fantasiye weyn oo laga sameeyey agagaarka garoonka.
Reds oo uu ka maqnaa kabtankooda khadka dhexe ee Jordan Henderson oo dhaawac ah, waxa khadka dhexe kusoo bilowday Naby Keita oo gool qurux badan dhaliyey, Saacad iyo dheeraad uu ciyaarta ku jirayna ahaa laacib si wanaagsan u shaqeeyey.
Keita ayaa dhaliyey goolka koowaad ee kooxdiisa oo ahaa mid uu ka toogtay bannaanka oo goolhaye Kepa Arrizabalaga uu xataa tiigsan kari waayey, waxaana u dheeraa inuu khadka dhexe ee kooxdiisa hagayay, isaga oo kubbad isku-dhiib, jiidis iyo indho furnaan ah muujinayay.
Xilli dambe oo uu u muuqday inuu is dhimay oo daal ku yimid ayaa la beddelay Keita, waxaana booskiisa yimid da’yarka Curtis Jones oo intii uu ku jiray garoonka muujiyey qaab wanaagsan.
Jones oo ay u ahayd kulankii shanaad ee horyaalka Premier League ee uu kasoo muuqdo kooxdiisa Liverpool, waxan uu nasiib u yeeshay in la siiyo abaal-marinta qoorta loo geliyey ciyaartoyda kale ee kooxdiisa, halka da’yarka ay soo wada baxeen ee Elliot aanu buuxin shuruudda ku xidhnayd biladda oo ahayd inuu shan ciyaarood kasoo muuqdo.
Tababare Jurgen Klopp ayaa warbaahinta u sheegay in labada ciyaartoy ee Naby Keita iyo Curtis Jones ay Liverpool u noqon doonaan labada xiddig ee xili ciyaareedka dambe ku hoggaamin kara inay masaafo ka horreeyaan naadiyada kale, waxaanu yidhi: “Laacib kasta oo hadda ciyaaray inta badan ee kulamada, waxa uu sii samayn karaa horumar. Taas ayaa ah da’da kooxda ee ay go’aamo wanaagsan ku samayn karaan, difaac ahaan ugu wanaagsanaan karaan, laakiin tusaale ahaan ciyaartoyda aan kulamo badan dheelin, sida Naby ayaa tusaale wanaagsan u ah. Curtis Jones ayaa sidoo kale ah tusaale. Ma doonayno inaanu culays weyn saarno, laakiin wuxuu u egyahay inuu diyaar yahay. Sidaa darteed, waxaanu haysanaa boosas bannaan oo ay suurtogal tahay inaanu horumar ku samayno.”